एमाले केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक सकियो, के–के भयो निर्णय ? - Nepalese Times
एमाले केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक सकियो, के–के भयो निर्णय ?
नेप्लिज संवाददाता १४ मंसिर २०७८, मंगलवार २१:१९ (1 महिना अघि) १७८ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । नेकपा एमालेको १० औँ केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक सकिएको छ ।
१० औँ केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकले १० औँ महाधिवेशन सफल पार्न सबै क्षेत्रबाट सघाउनेहरुलाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको छ।
एमाले महाधिवेशन सकिएलगत्तै सौराहामै बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सम्बोधन गर्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनका क्रममा सबै तह र तप्काबाट सघाउने सबैलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव राखेका थिए।
उनको प्रस्ताव सबै केन्द्रीय सदस्यहरुले ताली बजाएर पारित गरेका थिए। त्यस्तै ओलीको प्रस्तावमा पुरानो केन्द्रीय कमिटीलाई बैठकले धन्यवाद पनि दिएको थियो।
एमाले अध्यक्ष ओलीले अब सरकार गठन गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । मंगलबार १०औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आगामी चुनावबाट एमालेले ६० प्रतिशन मत ल्याउनुपर्ने बताए ।
“सरकार गठन गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ । आजैदेखि लाग्नुपर्छ । ६० प्रतिशत भोट ल्याउनुपर्छ । हामी जनताको घर घरमा जानुपर्‍यो । उनीहरूको मत जित्नुपर्‍यो,” उनले भने । उनले नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बधाई दिएका थिए ।
चितवनमा आयोजित १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ओली पुनः चार वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । ओलीले १८३७ मत पाएर अध्यक्ष चुनिंदा अर्का प्रत्यासी भीम रावलले २२३ मत पाएका निर्वाचन समितिका सदस्य बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।
सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास सफल नभएपछि मंगलबार बिहान निर्वाचन भएको थियो । एमालेका २ हजार १ सय ५३ प्रतिनिधिहरुमध्ये २ हजार ९६ मत खसेको थियो ।
नवौं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएदेखि एमालेको नेतृत्व ओलीले सम्हाल्दै आएका छन् । नवौं महाधिवेशनबाट रावल उपाध्यक्ष बनेका थिए । १० औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएपछि रावलले अध्यक्ष नबने केन्द्रीय सदस्यमा पनि नरहने घोषणा गरेका थिए ।